Okulandelayo | Umqeqeshi Wezamabhizinisi Osomabhizinisi
Sisemkhakheni wezomnotho ngokuqinile.
Ama-Solopreneurs kanye nosomabhizinisi bayikusasa lomsebenzi. Ucwaningo lukhombisa ukuthi ngonyaka izisebenzi ze-2025 ezizimele kanye nezisebenzi zenkontileka zizokwenza ingxenye enhle yabasebenzi. U-Upwork uthole ukuthi i-47% yalabo asebekhulile be-18-21 bathola ugesi ngonyaka owedlule. Imininingwane iveza ukuthi esizukulwaneni ngasinye abantu abaningi bakhetha ukuba ngabaphathi babo futhi bazosheshisa inqubekela phambili nempumelelo ngomqeqeshi oqeqeshiwe ofanele.
Ukuthi usungusomabhizinisi ophumelelayo noma ufuna ukuphuma kweyakho iCheryl Cran futhi iqembu lakhe linikela ngamasu okuqeqesha amabhizinisi ukukusiza uphumelele.
Uma okuthile kubalulekile ngokwanele, noma ngabe amathuba aphikisana nawe, kufanele ukwenze. ”
Sibamba imicimbi ebukhoma yonyaka yabosomabhizinisi lapho singena khona ezindaweni ezibalulekile ukuthola ubufakazi bebhizinisi lakho esikhathini esizayo. Lokhu kufaka ubuchwepheshe namahabhu ebhizinisi ukwenza lula nokukhula kalula kwebhizinisi. Ochwepheshe bezivakashi bafaka i-CIO's, ososayensi bokuziphatha, ososayensi bedatha, ubuchwephesha bezengqondo bochwepheshe bempumelelo nokuningi.
I-NextMap ibhizinisi lakho lokukhula okuphezulu
Wonke umuntu ozuze ubukhulu ukwenzile ngosizo. Osomabhizinisi abakhulu abanjengoRichard Branson, uSara Blakely, u-Elon Musk, noLori Greiner bonke babenezifundo zobuholi kanye / noma nomqeqeshi webhizinisi ukuhlinzeka ngemininingwane, imibono kanye nomongo. I-NextMapping yethu yethu yesamabhizinisi yokufundisa yenziwe ngezifiso zakho ezihlukile. Ngamaphepha emibuzo nokuhlola sakha 'inkambiso elandelayo' yakho nebhizinisi lakho. Sinikezela ngezinyanga ze-6 noma amaphakheji webhizinisi lezinyanga ze-12.
I-NextMapping yonyaka ™ yomcimbi wosomabhizinisi
Kanye ngonyaka sihlangana nosomabhizinisi abanomqondo ofanayo esimisweni sokubuyela emuva ukugxila ekutholeni ukuthi yikuphi okulandelayo kuwe njengosomabhizinisi nokuthi yini elandelayo ngebhizinisi lakho. Kulomcimbi wokuthuthukisa osomabhizinisi wezinsuku ze-2 uzokuzwa kubasubathi, ososayensi bezingcweti, abacebisi bezobuchwepheshe, abaholi emkhakheni wezingcikivo zokucabanga nokuguqulwa kwabaqeqeshi bebhizinisi. Uzoshiya lokhu ukubuyela emuva 'ngemephu' yakho yezenzo, amacebo nezinhloso ezinkulu ezinengqondo zokukusiza wenze kangcono kunokuqagela ikusasa lakho elinesibindi ... Uzoyifaka kumephu.
Uhlelo lokufundisa lokukhula okungajwayelekile lwenyanga engu-12
Joyina umsunguli wethu, uCheryl Cran ngokusakaza bukhoma kanye ngenyanga izinyanga ze-12 futhi ufinyelele kokuqukethwe ngezinhlelo zevidiyo, ukuqeqeshwa kwebhizinisi lochwepheshe, izifanekiso, amathuluzi nezinsizakalo zamahhala. Uzothola izindlela ezintsha zokukhulisa ibhizinisi lakho ngokuxhuma kumbono onesibindi osanda kucaciswa wenhloso yothando. Uzoxhumana nabanye osomabhizinisi abanjengawe abazokwabelana ngemfihlo yabo yempumelelo kanye nezifundo abazifundile.
Xhumana nathi ukuze ubhalise